BOOTMGR maqan yahay - Sida loo effortlessly hagaajin
> Resource > Utility > 2 Siyaabaha dayactir "BOOTMGR maqan yahay" Dhibaatada
Waa arrin aad looga xumaado aqrinayo "BOOTMGR maqan yahay". Uma isticmaali kartid in aad computer sida caadiga ah ilaa ay ka go'an. Laakiin ma noqon welwelsan tahay. Haddii ay taasi waxba kuma laha adiga oo hardware, waxaa jira 2 xal aad u hagaajin "BOOTMGR maqan yahay" arrinta ku Windows 7, Vista, XP, iwm
Jidka 1. BOOTMGR Fix seegay CD ah Downlaods
First of dhan, waxaad u baahan tahay in la abuuro CD ah Downlaods ama USB, oo ka shaqeeya la mid ah sida Windows DVD laakiin aad ka kharash yar. Wondershare LiveBoot Boot CD / USB noqon kartaa wax fiican doorasho. Waxaa kabaha kartaa computer iyo dayactiro dhammaan noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka Windows, sida screen buluug ah, shil boot, shil loading, iyo in ka badan. Waxaad ku heli kartaa adigoo gujinaya linkiga hoose.
Badan oo ku saabsan Wondershare Liveboot Baro
Ka dib markii uu iibsigu barnaamijka, waxaad heli doontaa email uu la yeeshay link download iyo code diiwaangelinta. Raadi computer ka xaalad wanaagsan si loo soo dajiyo barnaamijka oo registrate. Markaas raac tallaabooyinka hoose si aad samaysaan waxa aad u baahan tahay.
Tallaabada 1. Samee USB Downlaods drive / CD la Liveboot
Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka kombiyuutarka ah ka shaqeeya. Diyaari ah drive USB maran ama CD iyo geliso in kombiyuutarka meesha aad ku rakiban LiveBoot ah. Markaas mid-riix si ay u gubaan CD ah Downlaods ama USB drive ee interface ee soo socda.
Tallaabada 2. Boot computer la LiveBoot
Geli LiveBoot CD si aad u computer ee CD-ROM ama furaysto drive USB ah, iyo in ay bilaaban. Markii ugu rarataan culaysyo Windows, F12 jaraa'id galaan Menu Boot Device si degdeg ah. Dooro ee USB CD-ROM Drive. Dhowr ilbiriqsi ka dib, waxaad heli doontaa dhabar jab daaqadaha ah, ka dibna dooro "Boot ka LiveBoot".
Tallaabada 3. Start hagaajinta qaladka "BOOTMGR maqan yahay"
Ka dib is geliyey Windows, abuurtaan LiveBoot. Tag "Windows Recovery" iyo dooran "Boot Shil Xalka" tab. Halkan waxa aad ka arki kartaa calaamadaha of your computer markii Bootmgr maqan yahay, sababta oo ah dhibaatada iyo wixii xal ah. Sida laga yaabaa inay jiraan sababo kala duwan sababta Bootmgr maqan yahay, waxaa jira 4 hababka bixiyo. Waxaad iyaga isku dayi kartaa mid mid ilaa your computer si fiican u shaqaynayaan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la raaco tilmaamaha ku qoran interface ah in ay ku talaabsato.
Habka 1. Run Recovery Boot File a si uu u xaliyo dhibaatada.
Habka 2. Run "Disk Hubi" si uu u xaliyo dhinacyada xun oo saameyn ku loading nidaam faylasha. Reboot ka disk adag.
Habka 3. Run bootsect amarka amarka degdeg ah si uu u xaliyo shil keena baadi qaybta boot boot. Reboot ka disk adag.
Habka 4. Kani waa xalka ugu dambeeya haddii wax kasta ka sarreeya uma shaqeeyo. Run Windows Key Finder iyo Xafiiska Key Finder ay dib u hanato aad Windows iyo Xafiiska muhiimka ah, ka dibna dib ugu aad Windows iyo Office. Waxa kale oo ay kaa caawin kartaa inaad dib ilaa xogta oo dhan marka hore halkan.
Jidka 2. BOOTMGR Fix seegay DVD Windows ah
Haddii aad qabto disk Windows rakibo, si toos ah u waxaad isticmaali kartaa si uu u xaliyo arrinta Bootmgr ku maqan. Haddii aanad haysan mid ka mid ah, sida ugu horeysay waxaa lagu talinayaa, maxaa yeelay waxa ay badbaadin kartaa in aad wax badan oo ku saabsan wax iibsigu DVD ah rakibaadda Windows.
Next, aynu hubiyo sida uu u xaliyo dhibaatada Bootmgr maqan la DVD Windows ah in tallaabooyinka.
Tallaabada 1. Gali DVD Windows si aad DVD computer ciyaaryahan oo guuleysatey;
Tallaabada 2. Deji Luqadda, Time iyo keyboard on interface;
Tallaabada 3. Riix "Dayactir your computer";
Tallaabada 4. Windows ka dibna isku dayi doonaa in la helo buugga rakibo for Windows 7, Vista, ama XP. Haddii aad haysato in ka badan hal on your computer, ee ka dooro mid aad rabto in la dayactiro;
Tallaabada 5. Riix "Repair xawaaladaha";
Tallaabada 6. Waxaad arki doonaa fariin ah in "Repair xawaaladaha waxaa hubinaya nidaamka dhibaatooyinka ...",
Step 7. Marka sameeyay, taasi keeneysaa in aad ku guuleysatey in your computer.
Hadda, aad ka saari kara DVD iyo reboot your computer. Markaas waxaad ka heli doontaa in wax walba si fiican u shaqaynayaan.
Sida loo dayactir Windows XP shilalka ee Minutes
Sida loo dayactir Screen Black of Death
Sidee Baan U dayactir Windows XP Blue Screen Error
Yahoo Password Finder: Sida loo Helo Rasuulka Yahoo / Mail Password
Laba Siyaabaha sir PowerPoint Amniga
Sida loo dayactir Explorer Internet gaabis ah 8/9